Ahoana no hampiofana alika marenina | Tontolo alika
Indraindray ianao dia afaka mandray alika kely izay heverinao fa toy izany Fampiasa 100%, vao hitany herinandro vitsivitsy taty aoriana fa manana olana amin'ny fihainoana malemy izy. Ka ahoana no ahatongavanao mampiofana alika rehefa ny ankamaroan'ny fanazaran-tena fampiofanana dia mitaky fampiasana ny feo toy ny "Mipetraha" ary "mandry"?
Tao anatin'izay taona lasa izay, ny fanabeazana ny alika marenina notadiavina be io ary novolavolaina matetika ny fomba tsotra sy mahomby. Fahafahana ho an'ny fananganana alika marenina mitombo izy ireo ary tsy misy antony hamerenana ireo biby ireo hialokaloka.
1 Ny moana amin'ny alika
2 Ahoana no ahafantarako raha marenina ny alikako?
3 Ampiofano alika marenina
Ny moana amin'ny alika
Toy ny amin'ny olombelona, alika kely sasany teraka marenina, Ity no antsoina marenina hatrany am-bohony. Ho an'ny alika hafa, ny marenina dia azo avy amin'ny loharano maro, toy ny aretin-tsofina maharitra na ratra mifandraika amin'ny zava-mahadomelina misy poizina na fahanterana.
Misy zato eo ho eo karazana alika izay mora tohina kokoa marenina hatrany am-bohony noho ny hafa. Ny Dalmatians, ohatra, dia manana risika be dia be, miaraka amin'ny 30% ny alika kely teraka marenina amin'ny sofina iray na roa.
Ireo karazana hafa voan'io aretina io dia: ny English Setter, ny Australian Mountain Dog, ny Catahoula Leopard Dog, the Whippet Hound ary ny Parson Russell Terrier.
Mbola tsy fantatry ny mpahay siansa mazava ny antony mety hahaterahan'ireto alika ireto fa toa mazava ho azy misy fiatraikany amin'ny alika fotsy loha indrindra ny marenina na loha fotsy matetika. Araka ny fanadihadiana nataon'ny Amerikanina, ny tsy fisian'ny pigmenta-doha dia midika fa ny sela misy pigmenta amin'ny sofina dia manana olana amin'ny fivelarana na mety tsy misy mihitsy aza.
La tsy fisian'ny sela misy pigmenta izany dia miteraka fahafatesan'ny sela nerveuse, izay tena ilaina amin'ny fampandrosoana ny sofina. Mahaliana fa alika fotsy toy ny Samoyed tsy fantatrao ireo olan'ny marenina ireo, noho izany tsy voavaha tanteraka ny zava-miafina.
Ahoana no ahafantarako raha marenina ny alikako?
Si heverinao ve fa marenina ny alikanao, manaova fitsapana tsotra. Miandrasa mandra-pahafatin'ny alika anao na tsy mijery ary manaova feo mafy ao aoriany.
Tokony ho azonao antoka fa tsy mahita ny fihetsiketsehanao ilay biby na mahatsapa hovitrovitra (izay manilika ny fikapohany ny tongony amin'ny tany). Manaraka izany, andramo ny karazana feo. Tsofy ny kiririoka, mitehafa mafy, ary mikapoka amponga.
Ireo feo ireo dia tsy mitovy amin'ny fahazoana ny sarotra ny fihainoana ary hanampy anao izy ireo hanamarina raha marenina ny alikanao, na amin'ny ampahany na amin'ny ampahany.
Raha mahatsikaritra ianao fa manomboka tsy miraharaha anao tampoka ny alikanao na tsy mihazakazaka izy rehefa apetrakao ao anaty vilia ny kibble anao, hahaliana ny manao an'io fitsapana io hahazoana antoka fa tsy ny fihainoana azy ireo no simba. Raha tsy mamaly ireo feo ireo ny alikao dia tianao izany manao fitsapana feno kokoa, antsoy ny mpitsabo anao, izay afaka manolotra fitsapana samihafa.
Ampiofano alika marenina
Raha taona vitsy lasa izay mampiofana alika marenina Toa tsy ho vita izany, maro ny olona tia alika no nanadihady ny raharaha ary ny fanabeazana ny biby toy izany dia tsotra ankehitriny toy ny hafa rehetra.
Ny tena maha samy hafa azy dia fanentanam-panahy tokony tsy hiraharaha izy ireo noho ny antony miharihary. Fa kosa, toy ny amin'ny olombelona, ​​dia hanao izany ianao mampiasa fambara tanana, hampifandraisinao amin'ny hetsika famantarana mazava sy miavaka ny hetsika tsirairay.
Na inona na inona famantarana ampiasainao, tsy ho ela dia hitohy ianao ary hampiasa marika mitovy amin'izany ihany amin'ny hetsika mitovy amin'izany.
Misy angano izay tsy fahazoana mihaino mahatonga ny alika ho mahery setra kokoa izany ary raha ny tena izy, ny alika rehetra raha amporisihana amin'ny fomba tsy mety dia hanaikitra anao. Ny fifohazana izay mety ho sarotra indrindra amin'ny alika marenina, noho izany dia zava-dehibe izany manao fampiharana miaraka aminy hatramin'ny mbola kely.
Mifohaza ny alikao amin'ny alàlan'ny fitsaboana am-pelatanana, imbetsaka mandritra ny volana vitsivitsy voalohany ary tsy ho ela hampifandray ity fifohazana ity amin'ny zavatra tsara. Raha tsy te hahagaga ny alikao ianao dia azonao atao ny mamoha azy amin'ny alàlan'ny fikapohanao ny tongony amin'ny gorodona na amin'ny fandriana hatoriany, ny hovitrovitra dia hanaitra anao moramora. Ankoatr'izay, tsy misy na inona na inona azonao atao mba hampifanaraka ny toeranao amin'ny alikanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Ahoana no hampiofana alika marenina
Tamin'ny herintaona dia naka alika iray sahabo ho herintaona aho, fifangaroana Welsh Corgi. Rehefa afaka roa andro dia tsapako fa marenina toy ny rindrina izy, na dia nilaza tamiko aza ilay mpitsabo biby tao amin'ny foibe fananganana zaza fa ny zava-nitranga dia maloto be ny sofiny. Etsy ankilany, ny mpitsabo biby mahazatra ahy raha vantany vao nahita azy - fotsy be ny palitaony ary teboka volontany ihany - dia nilaza tamiko izy fa marenina tokoa. Izany dia.
Nanakarama etologista iray aho, ary avy eo mpanazatra, fa ankoatry ny fampianarana ahy hanome azy baiko amin'ny fihetsika dia tsy afaka nanao zavatra betsaka kokoa izy ireo: ny olana dia na eo aza ny kilemany, tena mahaleo tena sy matoky tena izy , tsy fantany aho ary tsy avelako hovahana na aiza na aiza raha tsy mikatona tanteraka, toy ny mangidihidy. Alika mavitrika be izy, tanora tokoa ary manana tanjaka be tsy zakany. Nanandrana collars vibration aho, saingy tsy dia nahomby. Tsy hitako izay hatao raha te hanome azy fahalalahana bebe kokoa aho nefa tsy mitaky risika fa handositra izy, very, na ratsy kokoa, voadonan'ny fiara.
Carmen, manana marenina Labrador aho, efa 3 taona izy, ary mbola manana ny olana mitovy aminao ihany aho 🙁 ny ataoko dia mailo kokoa aminy, satria raha miala izy dia resy. Izaho koa manana badge eo amin'ny vozon'akanjony, hamantarana azy
Ahoana ny fomba hahazoana alika amin'ny alika